छोटेलाल रौनियारः जो शेयर बढ्दा कहिल्यै मात्तिएनन्, घट्दा कहिल्यै आत्तिएनन्| Corporate Nepal
असोज ३१, २०७८ आइतबार १२:४२
काठमाडौं । नेपालको शेयर बजारमा एक परिचित नाम हो छोटेलाल रौनियार । उनलाई शेयर बजार जानकारको रुपमा नचिन्ने लगानीकर्ता कमै होलान । जीवनका साढे पाँच दशक उमेर व्यतित गरिसकेका रौनियार सफल लगानीकर्ताका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौंको मखनमा जन्मिएका उनी पाँच भाईमध्येका कान्छा छोरा हुन ।
बुबा शिवनन्दन र आमा मोतीदेवीका छोरा छोटेलाल रौनियार सबैभन्दा कान्छो भएकोले उनको नाम छोटेलाल रहेको हो । नेपालको शेयर बजार विकासमा ठूलै योगदान दिएका उनी १४–१५ वर्षअघि शेयर बजारमा लागेका हुन् । त्यसअघि उनी गार्मेन्ट कम्पनी चलाउँते । रौनियारको पुख्यौली पेशा नै कपडाको व्यापार ।
सानैदेखि भिन्न सोच र स्वभावका रौनियार परम्परागत कपडा पसल छोडेर गार्मेन्ट उद्योगमा होमिए । उत्पादनसँगै निर्यातमा लागे । लामो समय गार्मेन्टमा लागे पनि यस क्षेत्रमा उनी स्थापित हुन सकेन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै अन्य मुलुकले आफ्ना गार्मेन्ट उद्योगलाई प्रोटेक्शनको नीति लिए पनि नेपालको सरकारले आफ्ना उद्योग संरक्षणमा ध्यान नदिँदा धेरै गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन पुगे ।
गार्मेन्टमा दिगो हुन नसकेपछि छोटेलाल रोनियारले शेयर बजारतर्फ यूर्टन लिए । शेयर बजारमा उनको जीवनको दोस्रो इनिङ सुरु भएको मान्न सकिन्छ । रौनियारले १५ बर्षकै उमेरमा एसएलसी गरेका थिए । उनले जुद्धोदय स्कुलबाटबाट दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेका हुन । एसएलसी पास भएपछि रौनियारले व्यवस्थापन शंकरदेव क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह र पब्लिक युथ क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्रिण गरे ।
सानैदेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावका रौनियार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्दै थिए, त्यही बेलामा बुबाको निधन भयो । त्यसपछि सबै काम आफै गर्नुपर्ने दायित्व उनीमाथि आयो । व्यवस्थापनको विद्र्यार्थी भएको रौनियारलाई व्यवसाय सम्हाल्न खासै समस्या भएन् । २०३४ सालमा उनको बुबाको निधन भएको हो ।
बुबाको १३ दिने काजकर्म सक्किएलगतै रौनियारलाई दिदीले केही रकम हातमा थमाईदिइन् । अब त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने ? उनले सोच्न थाले । त्यो बेलामा गार्मेन्ट उद्योग निकै फस्टाएको बेला थियो । उनले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरे । त्यस क्रममा कपडाहरुको अर्डर जापान, अमेरिका जस्ता मुलुकबाट पनि अडर आउँथ्यो । २०३४ सालमा गार्मेन्ट पसल खोलेका रौनियारले चार बर्षमै गार्मेन्ट फ्याट्री खोले । उनले खोलेको कारखानामा झण्डै पाँच सय हाराहारीमा मजदुर कार्यरत थिए ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै रौनियारको गार्मेन्ट उद्योग पनि संकटमा पर्न थाल्यो । उक्त राजनीतिक परिवर्तनको केही बर्षमै फेरि माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो । शान्ति प्रक्रियापछि त माओवादीका अनेक युनियन खुल्न थाले । युनियनका नाममा अनेक अडचन सुरु हुन थाल्यो । उद्योग गर्ने वातावरण नै हुन सकेन् । कर्मचारीहरु नै आपसमा झगडा गर्ने, उद्योग व्यवस्थापनलाई धम्क्याउने क्रम सुरु भयो जसका कारण आएका अर्डर समयमा पुग्न सकेन् । गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्दा गर्दै देश विदेशमा माग हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कहिले माओवादी निकट कर्मचारीको तालावन्दी, कहिले कर्मचारीहरुकै कुटाकुटका कारण विस्तारै रोनियारको उद्योग धरायसी हुन थाल्यो । उनको उद्योग बन्द भएको झण्डै १४ वर्ष बितिसकेको छ ।
करोडौं लगानीमा सञ्चालित र झण्डै पाँच सय श्रमिक कार्यरत उद्योगमा ताला ठोक्न लाग्दा रौनियारले गार्मेन्ट व्यवसायमा धेरै घाटा व्यहोरिसकेका थिए । त्यसबाट आफूलाई सम्हाल्दै रौनियार मन भुलाउन श्रीमतीसँग लण्डन पुगे । देशको बिग्रदो राजनीतिक परिस्थितिपछि के गर्ने ? भन्ने कुरामा उनी अन्योलमा थिए । लण्डनको दुई महिना बसेर मन केही शान्त भएपछि उनी स्वदेश फर्किए ।
शेयर बजारमा प्रवेश
जब उनी स्वदेश फर्किए, तब रौनियारलाई नेपालमा काम गर्नको लागि केही काम थिएन । कम्पनी बन्द भइसकेको थियो । त्यसै क्रममा उनको साथीभाईसँग भेटघाट र छलफल गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै गए । त्यस क्रममा रौनियारसँगै गार्मेन्ट उद्योगका सहयात्रीसँग पनि भेट हुने गर्दथ्यो । उनका ती साथीहरु शेयर बजारमा प्रवेश गरिसकेका थिए । रौनियारले पनि आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीमा लगानी गर्न थाले । गार्मेन्ट उद्योग चल्दा नै केही कम्पनीको शेयर उनले किनेका थिए । साथीभाईको सल्लाहअनुसार उनले क्रमस? शेयर बजारमा लगानी बढाउँदै गए ।
रौनियार दिनभर ब्रोकर कम्पनीमा गएर कुकिज र चिया खाँदै शेयर बजारको बारेमा बुझ्ने र लगानी गर्ने गर्दथे । उनले त्यसरी गरेको लगानीको मूल्य पनि राम्रै भइरहेको थियो । त्यसै, नयाँ नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम सुरु भयो । राजा हटाउने काम भयो । हिजोको हिंसात्मक विद्रोही माओवादी सत्तामा आयो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने । भट्टराईले शेयर बजारलाई जुवा घर र उत्पादन नहुने क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै कागजको टुक्राको संज्ञा दिए । शेयर बजारप्रति अर्थमन्त्रीको नकारात्मक दृष्टि र राजनीतिक अन्योलताका कारण शेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट आयो । एक हजार एक सयको हाराहारीमा रहेको शेयर बजार तीन सय अंकको हाराहारीमा आएर रोक्कियो । यसबेला रौनियारले निकै ठूलो नोक्सान भोग्नुपर्यो ।
अन्यौलता र अनिश्चितताको समयमा रौनियार शेयर बजारमा प्रवेश गरेका थिए । उनले शेयर बजारको बारेमा अर्थशास्त्रका पुस्तकहरुमा त पढेका थिए, तर कसरी दोस्रो बजारमा किनबेच गर्ने ? जानकारी थिएन । केही साथीहरुको सहयोगमा शेयर खरिद त गरे तर शेयर बजार झन झन ओरालो लाग्दै गयो । रौनियार जसरी गार्मेन्ट उद्योगमा स्थापित भए, त्यसरी नै शेयर बजारमा स्थापित हुन चाहान्थे । तर, राजनीतिक परिस्थिति बाधक बनिरह्यो । शेयर बजार उकालो नलाग्दा रौनियार अन्योलमा परिरहेका थिए ।
त्यसबेलादेखि हालसम्म आउँदा रौनियारले शेयर बजारमा धेरै खालका उत्तार चढाव देख्दै आए । अनुभव संगाल्दै आए । बजार बढ्दा मात्तिएनन् । घट्दा आत्तिएनन् । आफ्नो निरन्तरता कायम राख्दै गए । आज उनी स्थापित भएका छन् । परिचित भएका छन् । शेयर बजारमा गिरावट आएर नेप्से ११ सय अंकमा आउँदा पनि रौनियार शेयर बजारबाट बाहिरिएनन् । जहाँ काम गरिन्छ, त्यहाँ दिल दिमाग दुबै लगाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका रौनियार गार्मेन्ट उद्योगको एउटा उचाईबाट खसे पनि फेरि उचाईमा पुग्न सफल भएका छन् । उचाई लिने क्रममै उनी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको अध्यक्षसमेत भएर शेयर बजार सुधारका लागि धेरै काम संघर्ष गरे जसको स्मरण धेरै लगानीकर्तादेखि नियामक संस्थाका अधिकारीहरु सम्झिरहन्छन् ।
टिएमएस प्रणाली अपग्रेड गर्न लगानीकर्ताको माग, सहज छैन्ः नेप्से
लगानीकर्तालाई इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्षको टिप्सः कसरी शेयर किन्ने ? कुन बेलामा बेच्ने ?
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षबिहीन हुँदा आईपीओ निष्काशनदेखि थुप्रै नीतिगत निर्णय अलपत्र
कात्तिक २९, २०७८ सोमबार
सुपर मादी हाईड्रोले ३१ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुन इच्छुकको संख्या ११ पुग्यो, को को हुन आवेदक ?